ထိုငျးနိငျငံမှာဖွဈခဲ့တဲ့လူသတျမူက သံသယတရားခံ တရုတျနိုငျငံသားနဈဦးကို ငှဆေောငျမှာဖမျးမိ – Voice of Myanmar
ထိုငျးနိငျငံမှာဖွဈခဲ့တဲ့လူသတျမူက သံသယတရားခံ တရုတျနိုငျငံသားနဈဦးကို ငှဆေောငျမှာဖမျးမိ
ပုသိမျ၊ မတျ ၃-၂၀၂၀
ဧရာဝတီတိုငျး၊ ပုသိမျမွို့နယျ၊ ငှဆေောငျကမျးခွမွေို့မှာ မနေ့ မတျလ ၂ရကျနကေ့ ထိုငျးနိငျငံကနေ
လူသတျမူနဲ့အလိုရှိနတေဲ့ သံသယတရားခံ တရုတျနိငျငံသား၎ဦးအနကျက
၂ဦးကို ဖမျးဆီးရမိခဲ့တယျလို့ ဧရာဝတီတိုငျးရဲတပျဖှဲ့ကနသေိရပါတယျ။
အဲ့ဒီတရုတျနိငျငံသားနဈဦးဟာ ရခိုငျပွညျနယျဂှမွို့ကို ရလေမျးခရီးနဲ့ထှကျခှာဖို့ ထိုငျးဘတျငှေ တှရေောငျးခနြပွေီး စကျလှတေဈစီးကို လိုကျလံဌားရမျးနတေဲ့အတှကျ
ဒသေခံတှကေမသင်ျကာလို့ သတငျးပေးစဈဆေးရာကနေ ထိုငျးနိုငျငံက လူသတျမူနဲ့အလိုရှိနတေဲ့ သံသယတရားခံပွေး၂ဦးဖွဈနတောကို တှရှေိ့ခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
“သူတို့ဟာ ထိုငျးနိုငျငံက လူသတျမူနဲ့အလိုရှိလို့ အကူအညီတောငျးထားတဲ့လူတှပေါ၊ မွဝတီ ကနေ မွနျမာနိငျငံကို ဝငျရောကျလာတယျလို့လဲ သတငျးရပွီးသားဖွဈလို့ ခုလိုဖမျးဆီးလိုကျနိငျတာပါ ” လို့ ဧရာဝတီတိုငျးရဲတပျဖှဲ့မှ ဒုတိယရဲမူးကွီးထှနျးရှကေပွောပါတယျ။
သံသယတရားခံတှဖွေဈတဲ့ တရုတျနိုငျငံသားနှဈဦးဟာ အသကျ ၃၁ အရှယျ Mr. Qinmiao နဲ့ အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ Mr. Gang Gang တို့ဖွဈတယျလို့ ဧရာဝတီတိုငျးရဲတပျဖှဲ့ကနေ သိရပါတယျ။
ရဲတပျဖှဲ့ကဖမျးမိတဲ့ သံသယတရားခံ ၂ ဦးကို ထိုငျးနိုငျငံကို ပွနျလညျလှဲပွောငျးပေးဖို့အတှကျ ဒီကနနေ့လေ့ယျပိုငျးမှာပဲ ပုသိမျမွို့နယျ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ လူစှမျးအားအရငျးအမွဈအဖှဲ့နဲ့ ပုသိမျမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့တို့က မွဝတီမွို့ကိုထှကျခှာသှားပွီလို့ ဧရာဝတီတိုငျးရဲတပျဖှဲ့မူးရုံးကနေ သိရပါတယျ။
#VOM #voiceofmyanmar #ပုသိမျ #ငှဆေောငျ #ထိုငျးနိုငျငံလူသတျမှု #သံသယတရားခံမိ
ထိုင်းနိင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသတ်မူက သံသယတရားခံ တရုတ်နိုင်ငံသားနစ်ဦးကို ငွေဆောင်မှာဖမ်းမိ
ပုသိမ်၊ မတ် ၃-၂၀၂၀
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ငွေဆောင်ကမ်းခြေမြို့မှာ မနေ့ မတ်လ ၂ရက်နေ့က ထိုင်းနိင်ငံကနေ
လူသတ်မူနဲ့အလိုရှိနေတဲ့ သံသယတရားခံ တရုတ်နိင်ငံသား၎ဦးအနက်က
၂ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။
အဲ့ဒီတရုတ်နိင်ငံသားနစ်ဦးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဂွမြို့ကို ရေလမ်းခရီးနဲ့ထွက်ခွာဖို့ ထိုင်းဘတ်ငွေ တွေရောင်းချနေပြီး စက်လှေတစ်စီးကို လိုက်လံဌားရမ်းနေတဲ့အတွက်
ဒေသခံတွေကမသင်္ကာလို့ သတင်းပေးစစ်ဆေးရာကနေ ထိုင်းနိုင်ငံက လူသတ်မူနဲ့အလိုရှိနေတဲ့ သံသယတရားခံပြေး၂ဦးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
“သူတို့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက လူသတ်မူနဲ့အလိုရှိလို့ အကူအညီတောင်းထားတဲ့လူတွေပါ၊ မြ၀တီ ကနေ မြန်မာနိင်ငံကို ၀င်ရောက်လာတယ်လို့လဲ သတင်းရပြီးသားဖြစ်လို့ ခုလိုဖမ်းဆီးလိုက်နိင်တာပါ ” လို့ ဧရာဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယရဲမူးကြီးထွန်းရွှေကပြောပါတယ်။
သံသယတရားခံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးဟာ အသက် ၃၁ အရွယ် Mr. Qinmiao နဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် Mr. Gang Gang တို့ဖြစ်တယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ သိရပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းမိတဲ့ သံသယတရားခံ ၂ ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံကို ပြန်လည်လွဲပြောင်းပေးဖို့အတွက် ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲ ပုသိမ်မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်အဖွဲ့နဲ့ ပုသိမ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က မြ၀တီမြို့ကိုထွက်ခွာသွားပြီလို့ ဧရာဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မူးရုံးကနေ သိရပါတယ်။
#VOM #voiceofmyanmar #ပုသိမ် #ငွေဆောင် #ထိုင်းနိုင်ငံလူသတ်မှု #သံသယတရားခံမိ